Olee otú mmekọrịta iPhoto Pictures ka iPad
Ụfọdụ mmadụ na-arịọ "otú mmekọrịta iPhoto foto iPad". Site exporting iPhoto foto Mac ka iPad, na ị na-enwe ike na-ele haziri nke ọma photos regulary ma ọ bụ ịkọrọ ha na ndị ọzọ na n'ụzọ zuru okè. Ka a okwu nke eziokwu, ọ bụghị nnọọ ike nyefee foto site na iPhoto ka iPad. E-anọgide ọtụtụ ụzọ. Na-esonụ, m na kpuchie 2 mfe ụzọ aka ị na-akpali foto site na iPhoto ka iPad. Họrọ ngwọta nke ahụ dị mma maka gị.
Ngwọta 1. Nyefee Photos si iPhoto ka iPad na Wondershare TunesGo Ochie (Mac)
Ngwọta 2. mmekọrịta iPhoto Pictures ka iPad
Ngwọta 1. Nyefee Photos si iPhoto ka iPad na TunesGo Ochie (Mac)
Ị mkpa mgbe nile jikwaa foto gị iPad, nri? ma n'ihi na gwakwara elu ohere ma ọ bụ sirila foto. Ọ bụrụ na ọ bụ ikpe, m ike reommend ị na-agbalị Wondershare TuensGo (Mac) ibudata foto ndị si iPhoto ka iPad, n'ihi na ọ bụ a keukwu ngwá ọrụ e mere n'ụzọ pụrụ iche n'ihi ọrụ nyefee ma jikwaa photos.
Nyefee Photos si iPhoto ka iPad hassle kpamkpam;
Mepụta foto albums on iPad ọma na jikwaa photos;
Hichapụ foto site na iPad onwe elu karịa ohere;
Nyefee foto site na iPad ka iPhoto maka ndabere ma ọ bụ edezi;
Nzọụkwụ: Export Photos si iPhoto ka iPad
Nzọụkwụ 1. Wụnye TunesGo Ochie (Mac)
Biko download ikpe version nke TunesGo Ochie (Mac) na gị Mac. Na mgbe ahụ Soro kpaliri iji wụnye ya. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6. Agba ya na jikọọ na gị iPad na gị Mac site eriri USB. Na nke abụọ, gị iPad ga-achọpụtara na-egosipụta na TunesGo Ochie (Mac) isi window.
Nzọụkwụ 2. Copy foto site na iPhoto ka iPad
Na-ekpe sidebar, pịa Photos iji bugote foto window ke ziri ezi. N'elu akara, pịa Tinye. Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, ịnyagharịa MEDIA> Photos> iPhoto. Mgbe ahụ, họrọ foto na ị ga-amasị nyefee. Pịa Open nyefee foto ndị si iPhoto gị iPad.
Video Tutorial: Nyefee Pictures si iPhoto ka iPad na Wondershare TunesGo Ochie (Mac)
Mbupụ iPhoto foto iPad site iTunes, biko imelite gị iTunes ka ọhụrụ version. Na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
1. Launch iTunes na gị Mac. Na iTunes, pịa necheputagh iPad, na ị ga-niile na taabụ na n'elu nke window. Họrọ "Photos taabụ.
2. Lelee nhọrọ mmekọrịta foto site na: ma họrọ iPhoto site na listi. Nke a activates nhọrọ - mmekọrịta dum iPhoto n'ọbá akwụkwọ gaa iPad ma ọ bụ naanị họrọ albums site n'inyocha nhọrọ Họrọ albums, ihe ... .
3. Na nri ala nke ihuenyo, pịa mmekọrịta na-eche maka mmekọrịta ịrụcha.
4. Mgbe syncing okokụre, ị pụrụ ịnụ ụtọ uploaded photos na Photos ngwa na gị iPad. The uploaded iPhoto foto ga-egosi dị ka ihe Album.
iPhoto Photo Book: Olee otú Mee a Photo Book na iPhoto
iPad Iweghachite: Naghachi Lost Photos, Videos, ana-akpo & Notes si iPad
Nyefee Movies si iPad ka iTunes nwere ike Ya mere Easy
Olee otú Download na Play YouTube Videos on iPad Obere
> Resource> iPad> Olee ka mmekọrịta iPhoto Pictures / Photos ka iPad